လူသားအရင်းအမြစ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အစိုးရနှင့်ပုဂ္ဂလိက ကဏ္ဍ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး နှီ? - Yangon Media Group
လူသားအရင်းအမြစ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အစိုးရနှင့်ပုဂ္ဂလိက ကဏ္ဍ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး နှီ?
မော်လမြိုင်၊ မေ ၁၁
အခြေခံလူသား အရင်းအမြစ် တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်း ကော်မတီ ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍ လူသားအရင်း အမြစ်ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရနှင့် ပုဂ္ဂလိ က ကဏ္ဍပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မည့် အစီ အစဉ်များ ရေးဆွဲချမှတ်ခြင်းနှီးနှောဖလှယ် ပွဲကို မေ ၁၁ ရက် နံနက် ၉ နာရီတွင် မွန်ပြည်နယ် မော်လမြိုင်မြို့ Hotel KS ၌ ကျင်းပခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ရှေးဦးစွာ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမျိုးသိမ်း ကြီးက ”နိုင်ငံ၏လူမှုစီးပွားဘဝဖွံ့ဖြိုးတိုး တက်ရေးတွင် ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍလူသား အရင်းအမြစ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးသည် အလွန်အရေးပါပြီး နိုင်ငံတော်အစိုးရ အနေနဲ့ ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် အောင် မူဘောင်ချမှတ်ထားပြီး ပိုမိုထိ ရောက်စွာ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင် ရွက်နိုင်ဖို့ ဒုတိယသမ္မတ (၁)ဦးဆောင်တဲ့ ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကော် မတီကို ဖွဲ့စည်းပေးထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ ကော်မတီအနေနဲ့ မူဘောင်မှာပါရှိတဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်ငါးရပ်ကို အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ လုပ်ငန်းကော်မတီ ငါးရပ်ကို ဖွဲ့စည်းပေးပြီးဖြစ်ပါတယ်”ဟု ပြောကြားသည်။
”နိုင်ငံရဲ့ လူမှုစီးပွားဘဝဖွံ့ဖြိုးတိုး တက်ဖို့အတွက် အထောက်အကူပြုတဲ့ Public Private Partnership လုပ်ငန်း တွေအောင်မြင်စေဖို့ ဆောင်ရွက်ရာမှာ ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းရှင်ကြီးများရဲ့ အခန်း ကဏ္ဍဟာ အရေးကြီးတဲ့အတွက် ဝိုင်းဝန်း ပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်ပေးကြပါလို့ တိုက်တွန်းလိုပါတယ်”ဟု ဒေါက်တာ မျိုးသိမ်းကြီးက ဆက်လက်ပြောကြား သည်။
ဆက်လက်၍ မွန်ပြည်နယ် လူမှုရေး ဝန်ကြီး ဒေါက်တာထိန်လင်းနှင့် မြန်မာ နိုင်ငံကုန်သည်များနှင့် စက်မှုလက်မှု လုပ်ငန်းရှင်များအသင်းချုပ် ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဒေါက်တာမျိုးသက်တို့က အမှာစကား ပြောကြားကြပြီး တက်ရောက်လာသူများမှ အုပ်စုငယ်များဖွဲ့၍ဆွေးနွေးကြကာ ရရှိ သည့်ရလဒ်များကို အဖွဲ့လိုက်တင်ပြခြင်း နှင့် မေးမြန်းဆွေးနွေးချက်များကို တာဝန် ရှိသူများကပြန် လည်ရှင်းလင်းဖြေကြားကြ ကြောင်း သိရသည်။
နေမာ၏ ပြစ်ဒဏ်အတွက် ပီအက်စ်ဂျီအသင်း အယူခံဝင်မည်
လားရှိုးမြို့တွင် ၂ဝဝ၈ အခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေး ထောက်ခံ ဆန္ဒထုတ်ဖော်
ဆံပင် ထပ်အဆွဲမခံရရန် ဂူအန်ဒူဇီ ဆံပင်ညှပ်မှ ရမည်ဟု အမ်မရီ ဟာသ လုပ်
ဘာစီလိုနာသို့ ပြန်လည်ပြောင်းရွှေ့ရန် နေမာ သဘောတူညီမှု ရခဲ့ပြီဟု သတင်းများ ထွက်ပေါ်
ပုဂံဒေသတွင် ပြဇာတ်ရုံတည်ဆောက်နိုင်ရန် တရုတ်နိုင် ငံမှ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ လာရောက်ဆွေ?
ပုဂံတွင် ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ်ဖြစ်ကြောင်း သင်္ကေတ အမှတ်အသားကျောက်တုံးကို ယခုနှစ်ကုန်ပိုင်း စိုက်ထူသွားမည်
မန္တလေး၌ ကျင်းပမည့် မြန်မာ-ထိုင်း ချစ်ကြည်ရေး သံဃာအပါး ၂ဝဝဝဝ ဆွမ်းဆန်စိမ်း လောင်းလှူပွဲတွင်
မကွေး တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့၊ တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်အဖွဲ့နှင့် ဒေသခံများတွေ့ဆုံ